Mufananidzo Mupepeti muZimbabwe
Photoshop maringe Dreamweaver
A edhari yemufananidzo munhu anokubatsira kuti uchinje, kugadzirisa, uye kugadzirisa mifananidzo yako. Kugadziriswa kwemifananidzo kunosanganisira maitiro ese ekugadzirisa mifananidzo yedhijitari, kunyangwe iri ekare mapikicha-makemikari anodhinda mapikicha edhijitari, kana mifananidzo. Izvo zvinogona kuitwa mune software kana neruoko. Pane nzira dzakasiyana dzekugadzirisa mifananidzo yako senge chirimwa, bvisa ziso dzvuku, simbisa pikicha, wedzera mhedzisiro, watermark, back-light, grey sikero, deskew, grayscale, nezvimwewo Photoshop, Elements, uye Paint Shop Pro zviri pakati pezvakakurumbira zvirongwa inoshandiswa nevanyanzvi vemifananidzo uye maartist. Aya mapurogiramu anokubatsira iwe kuti uite mifananidzo yako ive inonakidza, yakanaka, uye yehunyanzvi.
Kugadziriswa kwemifananidzo kunosanganisira matanho akati wandei: kuona mhando yemhando yemifananidzo, kugadzirisa kupenya uye kupesana, mavara, uye mamiriro. Zvishandiso zvinonyanya kushandiswa mukugadzirisa ndeye Brush Strokes / UI, Hexagon, gradient, kufukidza, masking, marquee, Radial Blending, curve chishandiso, uye translucency. Mifananidzo mhariri inogona kukubatsira iwe kuvandudza mhando yemifananidzo yako. Unogona kushandisa mafirita kugadzirisa mhando yemifananidzo. Kana iwe uchida kuisa imwe mhando yeshanduko pamufananidzo wako, ipapo Photo Mhariri inopinda mukuita.
Mhariri yemufananidzo inogona kuchengetedza nguva yako. Haufanire kuenda kunze uye unotsvaga yakanaka komputa, nyanzvi, uye internet. Ingovhura Adobe Photo Edhita, sarudza mufananidzo wako, tinya bhatani 'OK' uye tanga kugadzirisa. Iwe haufanire kunetseka nezve mhedzisiro. Shanduko dzako dzichachengetedzwa pasina kukanganisa mifananidzo yakaratidzwa.
Mhando dzakasiyana dzevagadziri vemifananidzo dzinoshandiswa zvakanyanya kugadzirisa mifananidzo yemadhijitari senge mifananidzo, mifananidzo, marogo, uye mapikicha emunhu (senge mabhavhari ekuzvarwa) Adobe Photoshop ndiyo inonyanya kushandiswa mufananidzo mhariri. Nekudaro, kune mamwe akasiyana mapurogiramu zvakare anogona kuita kuti basa rako rikurumidze. Kunyangwe kana Photoshop iri iro rinonyanya kushandiswa chirongwa, haina kukurudzirwa kune ese marudzi emifananidzo ekugadzirisa. Chinyorwa chikuru chinotsanangura musiyano uripo pakati pe Photoshop, Dreamweaver, InDesign, uye zvimwe zvirongwa.
Photoshop ndiyo yakanakisa mufananidzo mupepeti maererano nekugadzirisa mapikicha uye mifananidzo, kutsikisa kana kudhinda, kudzokororazve mifananidzo nemifananidzo, uye kugadzirisa zvinyorwa kana zvirimo. Inowanikwa mune dzakasiyana vhezheni, kutanga kubva kune yekutanga vhezheni kusvika padanho rehunyanzvi. Iwe unogona kuita yako yekugadzirisa mune angave akatwasuka ma modes (ane chete akatenderera kana mativi emakona) kana kugadzirisa nekushandisa makakombama, madhigirii, uye matete. Iko zvakare kune sarudzo yekupa yakawedzera kururamisa kumifananidzo, iyo inozivikanwa sekukara kururamisa.
Kana iwe ukachinja saizi chifananidzo uchishandisa Photoshop, mhedzisiro yacho angave mufananidzo mutsva kana ikopi yakakwenenzverwa yeiyo yekutanga. Kuti uchinje saizi yepakutanga, unogona kushandisa imwe yesarudzo dziripo - kuponesa, kurima, kufirita, uye kudzikisa. Imwe yeaya maturusi inopa madhigirii mana akasiyana ehukuru hwekugadzirisa, uye nekuenderera mberi iwe kufambira mberi mukugadzirisa, maturusi mazhinji uye maficha aunowana kwauri.
Dreamweaver yakawedzera maficha ekugadzirisa maficha anosanganisira bharanzi rinokutendera kuti uite chero chaunoda nemifananidzo yako. Chinangwa chikuru cheDreamweaver ndechekugonesa iwe kuvaka mapeji ewebhu nekukurumidza uye nyore, asi iine zvimwe zvakasarudzika maficha izvo zvinoita kuti zvisiyane uye zvakanaka kukoshesa kufunga kana iwe uchifarira kugadzira hunyanzvi hunotarisa mapeji ewebhu. Iwe unogona kugadzira, kuisa, kutumidza zita, kudzima, uye kusanganisa zvinhu uye ma module. Iwe unogona kuwedzera masitayera kumapeji ako futi. Iwe unogona kuona chitsauko uye pani maonero paunenge uchigadzira iwo, uye iwe unogona kufambisa windows kutenderera usingavavhiringidze kana iwe uchidaro. Iwe unogona zvakare kuve iyo Dreamweaver skrini yakakamurwa yakatwasuka kana yakatwasuka, uye iwe unogona kuwedzera zvinongedzo pakati pemapeji evaverengi kuti vakwanise kuenda kubva kune imwe vachienda kune imwe nyore.
Mukupesana ne Photoshop, umo mune saizi imwe chete iyo inogona kushandiswa kune chero mufananidzo, Dreamweaver inokutendera iwe kusarudza saizi dzakasiyana dzemifananidzo yematanho akasiyana, uye gadzira chero mhando yemufananidzo iwe yaunoda kushandisa akasiyana maturu. Unogona kurima pikicha uchishandisa mufananidzo mupepeti, kuchishandura nekucheka, kurodza, kuwedzera ruvara, uye nezvimwe zvakawanda. Dreamweaver inopa dhonza-uye-kudonhedza interface yekugadzirisa zvakapusa, uye inosanganisira akawanda plugins ekugadzirisa mifananidzo. Chinhu chakanyanya kukosha kuti urambe uchifunga nezve Dreamweaver ndechekuti zvinoda huwandu hwakawanda hwendangariro kuti uchengete mifananidzo nezvimwe zvakadaro, uye saka inogona kunge isiri sarudzo yakanakisa kune avo vane makuru mafaera emifananidzo kana akaomarara maficha. Asi kana iwe uchinge wakasununguka kushandisa zvinyorwa-based editors, saka Dreamweaver inogona kunge iri izvo zvauri kutsvaga.